बिहानदेखि साँझसम्म सेवा प्रवाह गरेको छु : सिडिओ नवराज जैसी - sailungonline
१२ पुष २०७८, सोमबार १७:३९ । रसुवा
नवराज जैसी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भएर कार्यरत छन् । उहाँ यस कार्यालयमा भएदेखि सेवाग्राहीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर साँझसम्म सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर सरस्वती न्यौपानेले उहाँसँग गरेको कुराकानी :
हिमाली जिल्ला रसुवाका जनताको सेवा गर्न पाउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
राजधानीदेखि नजिकै रहेको विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा रहेको यस पवित्रभूमि रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा रही जनताको सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । असाध्यै भाग्यमानी ठानेको छु ।
तपाईँ रसुवामा आउनुभएको लगभग तीन महिना हुदैछ । यस अवधिमा सेवाग्राहीलाई के कसरी सेवा प्रदान गरिरहनुभएको छ ?
म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा आइसकेपछि यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरूमा सहज बनाएको छु ।
सेवाग्राहीको भावनालाई ध्यानमा राखी नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका सेवाहरू बिहान अफिस समयदेखि बेलुकी साँझसम्म प्रदान गर्ने गरिएको छ । अत्यन्तै चिसो बढेको यस समयमा समेत साँझसम्म कार्यालयमा रही सेवा प्रवाहमा खटिई रहनुभएकोमा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
त्यसो भए आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिक सेवा प्रवाहलाई पद्धति र पारदर्शी मुखी बनाउने, विकास निर्माण कार्यमा सहजीकरण गर्ने र सरकारका तहहरूबिच समन्वय कायम गर्ने कार्यमा नै म केन्द्रित भएको छु । खास गरी यस जिल्लामा मित्रराष्ट्र चीनसँगको रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकोले द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण र पारवहन सहजताका लागि सडक स्तरोनन्तीलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएपछि उल्लेखनीय कार्य गर्नुभएको छ ?
म यस जिल्लामा हाजिर भएपछि पहिलो महत्त्वपूर्ण काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई दिएको छु । दोस्रो आम नागरिकको हितलाई दृष्टिगत गरी यातायात व्यवसायीको सहमति मै यस जिल्लामा सार्वजनिक यातायातको बस भाडा घटाउने कार्य गरियो। फलस्वरूप धुन्चे –काठमाडौँ सार्वजनिक बस भाडा साबिक भन्दा ८७ रुपैयाँले कमी भएको छ। यस कार्यले गरिब र विपन्न नागरिकलाई ठुलो राहत भएको होला भन्ने महसुस गरेको छु ।
त्यसै गरी गोसाईंकुण्ड पदमार्गमा रहेका सबै होटलहरु सधैँ नखोल्ने गरेका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई खान, बस्न लगायतका कुरामा सास्ती हुने गरेको थियो। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कडा निर्देशनपछि व्यापारीहरूको एक खालको उक्त सिन्डिकेट हटेको छ ।
मुलुककै लाइफ लाइनको रूपमा रहेको रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा कन्टेनर पार्किङ यार्ड नहुँदा अहिले ठुलो समस्या झेल्नुपरेको छ । यस समस्याको समाधान गर्न अहिले ५ करोड भन्दा बढी लागतमा कन्टेनर पार्किङ यार्ड निर्माण कार्य प्रारम्भ स्वरूप टेन्डर सूचनामा गएको छ । यसलाई महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिएको छु ।
जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ?
म प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आइसकेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानबिच सूचना सङ्कलन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्यको प्रबन्ध मिलाएको छु। जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खट्ने गरेका र स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकको साथ र सहयोगका कारण जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत रहेको महसुस गरेको छु ।
#जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा